ဟယ်လင် Pitt Douglass, ဖရက်ဒရစ် Douglass ၏ဇနီး
ဟယ်လင် Pitt Douglass
ဖရက်ဒရစ် Douglass 'ဒုတိယဇနီး
အငြင်းပွားဖွယ်မျိုးကွဲအိမ်ထောင်မှာဖရက်ဒရစ် Douglass ၏ဒုတိယဇနီး,
အဆိုပါဖရက်ဒရစ် Douglass သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သတိရအောက်မေ့အသင်းတည်ထောင်သူနှင့်သူ၏အာရဇ်ဟေးလ်အိမ်မှာနေတဲ့သမိုင်းရဲ့ site အဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းကိုသိမြင်
အလုပ်အကိုင်: ဆရာ, စာရေး, ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား (အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး, Anti-ကျွန်စနစ်, အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများ)
ရက်စွဲများ: 1838 - ဒီဇင်ဘာလ 1, 1903
ဟယ်လင် Pitt Douglass အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဟယ်လင် Pitt Honeoye နယူးယောက်၏သေးငယ်တဲ့မြို့မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည်။
သူမ၏မိဘများကုန်ကူးသည့်စနစ်ပပျောက်ရေးသဘောထားရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ကလေးငါးယောက်၏ရှေးအကျဆုံးကြီးနှင့်သူမ၏ဘိုးဘေးတို့သည်မေဖလားဝါးအပေါ်နယူးအင်္ဂလန်မှလာသောပြစ်ကိလ Alden နှင့်ယောဟန် Alden, ပါဝင်သည်။ သူမလည်းကသမ္မတတစ်ဦးဝေးကွာသောဝမ်းကွဲခဲ့ ယောဟန်သည်အဒမ် နှင့်သမ္မတ၏ ယောဟနျသ Quincy Adams ။
ဟယ်လင် Pitt အနီးအနားလီမာ, New York မှာနေတဲ့အမျိုးသမီးကျမ်းစာသင်ကျောင်းမက်သဒစ်ကျမ်းစာသင်ကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်ထို့နောက်တက်ရောက်သည် တောင်ပေါ်မှာ Holyoke အမျိုးသမီး Seminary မှာ 1837 ခုနှစ်တွင်မာရိသည်လိုင်ယွန်တို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, နှင့် 1859 ခုနှစ်များတွင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦးကဆရာ, သူမမှာဆုံးမသွန်သင် Hampton Institute က ဗာဂျီးနီးယား, freedmen များ၏ပညာရေးအတွက်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးအပြီးတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျောင်း။ ဆင်းရဲသောသူသည်ကျန်းမာရေးအတွက်, သူကျောင်းသားများအနှောင့်ယှက်အချို့ဒေသခံများစွပ်စွဲထားတဲ့အတွက်ပဋိပက္ခအပြီး, သူမနောက်ကျော Honeoye မှာမိသားစုနေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
1880 ခုနှစ်, ဟယ်လင် Pitt သူမ၏ဦးလေးနှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါ, ဝါရှင်တန်ဒီစီသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမသည်အဆိုပါအာလဖအပေါ်ကယ်ရိုလိုင်း Winslow တစ်ဦးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးထုတ်ဝေအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖရက်ဒရစ် Douglass, အလူသိများတဲ့ကုန်ကူးသည့်စနစ်ပပျောက်ရေးနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်ဟောင်းကျွန်, တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမှာပြောသောခဲ့သော 1848 Seneca အဘိဓါန်ရေတံခွန်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကွန်ဗင်းရှင်း ။
သူသည်အဘယ်သူ၏နေအိမ် pre-ပြည်တွင်းစစ်ကြီး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သောဟယ်လင် Pitt '' အဘ၏တစ်ဦးအသိအကျွမ်းခဲ့ မြေအောက်ရထားလမ်း ။ 1872 ခုနှစ်တွင် Douglass အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ - သိပ္ပံအတတ်တော်သို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်မပါဘဲ - တူညီသောအခွင့်အရေးပါတီ၏ဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်အတူ ဗစ်တိုးရီးယား Woodhull သမ္မတအမည်စာရင်းတင်သွင်း။ တစ်လထက်လျော့နည်းအကြာတွင် Rochester ရှိသူ၏နေအိမ်မီးရှို့မှု၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်ချမီးရှို့ကြ၏။
Douglass Rochester, NY ကနေ, ဝါရှင်တန်ဒီစီရန်, သူ၏ဇနီးအန်နာ Murray ဝါရှင်တန်အပါအဝင်သူ့မိသားစုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Douglass ခရိုင်များအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဖော့ဒျခဟေးယက်ကအမေရိကန်ကိုမာရှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်သောအခါ 1877 ခုနှစ်တွင်သူထံသို့ဆောင်ခဲ့ဖို့ Anacostia မြစ်အပေါ်စီးနေတဲ့အိမ်ကပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အာရဇ်သစ်သားအဘို့အာရဇ်ဟေးလ်ခေါ်သောအခါသူသည် 1878 တွင်ပိုမိုမြေယာဆက်ပြောသည်ဝယ်ခဲ့ 15 ဧက။
1881 ခုနှစ်တွင်သမ္မတဂျိမ်းစ်အေ Garfield ကိုလံဘီယာ၏ခရိုင်များအတွက်လုပ်ရပ်တွေအတွက်၏ Recorder အဖြစ် Douglass ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ Douglass ဘေးတွင်တံခါးကိုအသကျရှငျဟယ်လင် Pitt, ကြောင်းရုံးထဲမှာစာရေးအဖြစ် Douglass အားဖြင့်ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ သူကမကြာခဏခရီးသွားခဲ့လညျးမိမိကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်; ဟယ်လင် Pitt ကြောင်းအလုပ်အတွက်သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ, 1882 ခုနှစ်, အန်း Murray Douglass အနိစ္စရောက်လေ၏။ သူမသည်အချို့သောအချိန်များအတွက်နေမကောင်းခဲ့သညျ။ Douglass နက်စိတ်ကျရောဂါသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ သူကဆန့်ကျင် Lynch လှုပ်ရှားမှု့အပေါ် Ida ခဝဲလ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လာတယ်။
ဖရက်ဒရစ် Douglass မှအိမ်ထောင်ရေး
ဇန်နဝါရီလ 24, 1884 တွင်, ဖရက်ဒရစ် Douglass နှင့်ဟယ်လင် Pitt ကသူ့အိမ်တွင်, အဗျာ Francis ကဂျေGrimkéတက်ရောက်သေးငယ်တဲ့အခမ်းအနားအတွင်းလက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ (Grimkéဝါရှင်တန်၏ဦးဆောင်အနက်ရောင်ဝန်ကြီးလည်းအဖြူရောင်ဖခင်နှင့်အနက်ရောင်ကျွန်မိခင်နှင့်အတူ, ကျွန်အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သညျ။ သူ၏ဖခင်ရဲ့အစ်မတွေ, နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့်ကုန်ကူးသည့်စနစ်ပပျောက်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စာရာGrimké နှင့် Angelina Grimké , Francis ကယူခဲ့ကြောင်းနှင့် သူတို့ကဤရောထွေး-ပြိုင်ပွဲတူ၏တည်ရှိမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, သူတို့ရဲ့ပညာရေးကိုမြင်ကြသောအခါမိမိညီ Archibald ။ ) အဆိုပါလက်ထပ်ထိမ်းမြားအံ့သြစရာများက၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများယူကြပြီပုံရသည်။
New York Times ကို (ဇန်နဝါရီလ 25, 1884) တွင်အဆိုပါအကြောင်းကြားစာအိမ်ထောင်ရေး၏အရှုပ်တော်ပုံအသေးစိတ်ကိုအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်သောအရာကိုမီးမောင်းထိုးပြ:
"ဝါရှင်တန်, ဇန်နဝါရီလ 24 ဖရက်ဒရစ် Douglass, အရောင်စုံခေါင်းဆောင်, အလှမယ်ဟယ်လင်အမ် Pitt ဒေါက်တာGrimké၏အိမျတျောမှာအရပျကိုလုယူသောယခင်က Avon, နယူးယော့တစ်အဖြူအမျိုးသမီးတစ်ဦးက The မင်္ဂလာဆောင်မှယနေ့ညနေပိုင်းတွင်ဤမြို့၌လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် အဆိုပါ Presbyterian အသင်းတော်၏, သာသက်သေခံနှစ်ပါးကိုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်း, ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ရောင်စုံအမျိုးသမီးတစ်ဦးသူမစ္စတာ Douglass ၏ပထမဦးဆုံးဇနီး, လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကအကြောင်းကိုအနိစ္စရောက်လေ၏။ သူကယနေ့လက်ထပ်ထိုမိန်းမသည်အသက်နှင့် ပတ်သက်. 35 နှစ်ဖြစ်ပြီး, သူ့ရုံးခန်းထဲမှာ copyist အဖြစ်အသုံးချခဲ့သည်။ မစ္စတာ Douglass သူ့ကိုယ်သူအသက်နှင့် ပတ်သက်. 73 နှစ်နှင့်သူ၏လက်ရှိဇနီးအဖြစ်ဟောင်းအဖြစ်သမီးတို့ရှိပါတယ်။ "
ဟယ်လင်ရဲ့မိဘများအိမ်ထောင်ရေးဆန့်ကျင်, သူ့စကားပြောတော့ဘူး။ ဖရက်ဒရစ်ရဲ့သားသမီးများမှာလည်းသူတို့ရဲ့မိခင်အားမိမိအိမ်ထောင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်တကားယုံ, ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။
(Douglass သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဇနီးနှင့်အတူသားသမီးငါးယောက်ရှိ၏တယောက်သည်, Annie, 1860. ခုနှစ်အသက် 10 မှာကွယ်လွန်) အဖြူနှင့်အနက်ရောင်နှစ်ဦးစလုံး, အခြားသူများအတိုက်အခံထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ပင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှာဒေါသ။ အဲလစ်ဇဘက် Cady Stanton တို့ , အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့်အနက်ရောင်ယောက်ျားရဲ့အခွင့်အရေးကိုဦးစားပေးအပေါ်အဓိကအချက်တခုကနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်မှာ Douglass ၏သက်တမ်းကြာမိတ်ဆွေတစ်သော်လည်း, အိမ်ထောင်ရေး၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတို့တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Douglass အချို့သောဟာသတွေနဲ့တုန့်ပြန်နှင့်ဤသူသည်ငါဘက်မလိုက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေထူ "ဟုကိုးကားခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးဇနီးငါ့အမိ, ဒုတိယများ၏အရောင်, ငါ့အဘ၏အရောင်ခဲ့သည်။ "သူလည်းရေးသားခဲ့သည်,
"သူတို့အရောင်ကျွန်မိန်းမနှင့်အဖြူကျွန်သခင်၏ဥပဒေမဲ့ဆက်ဆံရေးကျော်တိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထက်အနည်းငယ်အရိပ်ပေါ့ပါးတဲ့ဇနီးလက်ထပ်ဘို့အကြှနျုပျကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကလူကြိုက်များမျက်စိတစ်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပြစ်မှုအတွက်, ခံခဲ့ရသည်ငါ၏အကိုယ့်ကိုယ်ကိုထက်အသားအရေအတွက်အများကြီးမဲမှောင်နေတဲ့လူတစ်ဦးကိုလက်ထပ်ဖို့မကန့်ကွက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အများကြီးပေါ့ပါးတဦးတည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့, ငါ့အဘ၏အသားအရေများထက်ငါ့အမိ၏၏ ငါအဖြူနှင့်အနက်ရောင်ရောနှောခြင်းဖြင့်ဝိုင်းပယ်ခံရဖို့ခဲ့သည့်အဘို့နှင့်တဦးတည်း။ "
1857 ခုနှစ်အစပိုင်း၌, Douglass Ottilie Assing တစ်ဂျာမန်ဂျူးလူဝင်မှုခဲ့သူတစ်ဦးစာရေးဆရာနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ Assing မတိုင်မီအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူ၏ဇနီးနှင့်အတူအနည်းဆုံးရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့လေသည်။ Assing ပုံကိုသူအထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးပြီးနောက်သူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း, အန်နာဟာသူ့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမရှိတော့သူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ခဲ့တာမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ သူမသည်အိမ်ထောင်ရေး, ကျွန်ဖြစ်ခဲ့အလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာသူ၏မိခင်ထံမှကိုက်ပင်သည်သူ၏အဖြူဖခင်တို့ကအသိအမှတ်ပြုတစ်ခါမျှသူတစ်လူအားဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်အပေါ်ရေတွက်မရခဲ့ပေ။
သူမသည် 1876 ခုနှစ်ဥရောပအဘို့ကျန်ကြွင်းသူရှိသူမ၏ပူးပေါင်းဘယ်တော့မှကြောင့်စိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟယ်လင် Pitt လက်ထပ်ပြီးနောက်သြဂုတ်လသူပုံတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူနေထိုင်ခဲ့အဖြစ်သူ့ကိုမှကယ်နှုတ်ခံရဖို့သူမ၏အလိုတော်အတွက်ပိုက်ဆံထွက်ခွာ, ပဲရစ်မှာရင်သားကင်ဆာ, မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခံစားနေရပြီး။
ဖရက်ဒရစ် Douglass '' နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းခွင်နှင့် Travels
1886 ကနေ 1887 ရန်, ဟယ်လင် Pitt Douglass နှင့်ဖရက်ဒရစ် Douglass ဥရောပနှင့်အဲဂုတ္တုပြည်အတူတူခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ထို့နောက် 1889 ကနေ 1891 မှ, ဖရက်ဒရစ် Douglass ဟေတီရန်အမေရိကန်ဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ဟယ်လင် Douglass အဲဒီမှာသူနှင့်အတူအသက်ရှင်ဝါရှင်တန်သို့ပြန်သွား၏။ သူဟာ 1891 ခုနှစ်မှာနုတ်ထွက်နှင့် 1894 မှ 1892 ခုနှစ်, သူ Lynch ဆန့်ကျင်ပြောကျယ်ကျယ်ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ 1892 မှာ, သူလူမည်းငှားရမ်းများအတွက် Baltimore အတွက်အိမ်ရာတည်ထောင်အလုပ်လုပ်လာတယ်။ 1893 ခုနှစ်တွင်ဖရက်ဒရစ် Douglass ချီကာဂိုအတွက်ကမ္ဘာ့ Columbian Exposition မှာ (ဟေတီများအတွက်ကော်မရှင်နာအဖြစ်) ကိုသာအာဖရိကန်အမေရိကန်အရာရှိတဦးကဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆုံးမှအစွန်းရောက်သူအကြံဉာဏ်အရောင်များ၏လုလင်တယောက်သည်အားဖြင့် 1895 ခုနှစ်တွင်ဟုမေးလျှင်, သူကဒီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်: "လံှု့ဆော်! လံှု့ဆော်! လံှု့ဆော်! "
ဖေဖော်ဝါရီလ, 1895 ခုနှစ်, Douglass တစ်ဟောပြောပွဲခရီးစဉ်ကနေဝါရှင်တန်သို့ပြန်သွား၏။ သူကဖေဖော်ဝါရီလ 20 ရက်နေ့တွင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသားကောင်စီအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နှင့်ရပ်တည်မှုထူထပ်မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ အိမ်ပြန်တွင်သူသည်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါရှိခဲ့တယ်, ထိုနေ့၌သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲလစ်ဇဘက် Cady Stanton တို့ဖြစ်သော eulogy ရေးသားခဲ့သည် Susan B. Anthony ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ သူ Rochester, New York မှာတောင်ပေါ်ကမျှော်လင့်ချက်သုသာန်မှာသင်္ဂြိုဟ်လေ၏။
ဖရက်ဒရစ် Douglass အောက်မေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်
Douglass သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်သူကအလုံအလောက်သကျသခေံလက်မှတ်ပေါင်းမရှိသောကွောငျ့, ဟယ်လင်မှအာရဇ်ဟေးလ်ထွက်ခွာသည်သူ၏အလိုတော်ကို, မမှန်ကန်တဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
Douglass '' ကလေးများအိမ်ခြံမြေရောင်းဖို့ဆန္ဒရှိပါကြောင်း, ဒါပေမယ့်ဟယ်လင်ဖရက်ဒရစ် Douglass တစ်ဦးအောက်မေ့ဖွယ်အဖြစ်ကငျြတယျ။ သူမသည်အပါအဝင်အာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေ၏အကူအညီဖြင့်တစ်ဦးအောက်မေ့ဖွယ်အဖြစ်တည်ထောင်ရန်ရန်ပုံငွေမှအလုပ်လုပ်ခဲ့ Hallie Quinn ဘရောင်း ။ ဟယ်လင် Pitt Douglass ရန်ပုံငွေအတွက်ဆောင်ကြဉ်းနှင့်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားမြှင့်ရန်သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့သမိုင်းသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာအကြီးအကျယ်ပေါင်ခံခဲ့ရသော်လည်းသူမသည်, အိမ်နှင့်ယျြဧကဝယ်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။
သူမသည်လည်းဖရက်ဒရစ် Douglass သတိရအောက်မေ့ခြင်းနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးထည့်သွင်းမယ်လို့လွန်နေတဲ့ဥပဒေကြမ်းရှိသည်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မူလကတိကျမ်းစာ၌လာသည်အဖြစ်ဥပဒေကြမ်း, အငယ်ဆုံးသား, ချားလ်စ် R. Douglass Douglass '' တောင်ပေါ်ကမျှော်လင့်ချက်သုသာန်အာရဇ်ပင်တို့ကိုဟေးလ်, Douglass မှအကြွင်းအကျန် '' ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အောက်တိုဘာလ 1, 1898 ရက်တွင် New York Times ကိုအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက်, သူ့မိထွေးဆီသို့ဦးတည်သည်သူ၏သဘောထားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့:
"ဒီဥပဒေကြမ်းကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်စော်ကားမှုနှင့်စျောဖြစ်ပါတယ်။ ဖရက်ဒရစ် Douglass တစ်ဦးအောက်မေ့ဖွယ်၏တပြင်လုံးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုစေနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီမှာပြန်ယူဆောင်စေခြင်းအဆိုပြုထားသည်။ ဥပဒေကြမ်း၏ပုဒ်မ9အကြှနျုပျအဘ၏ကိုယ်ကိုမိမိအအဖော်များနှင့် helpmeet ကောင်းစွာ-အနီးသို့ထက်ဝက်အဘို့ရာစုနှစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဘယ်သူယခုအရာကြွင်းလေကွာငါ့အမိ၏ဘေးထွက်ထံမှယူဘယ်မှာတောင်ပေါ်ကမျှော်လင့်ချက်သုသာန်, ကနေဖယ်ရှားစေခြင်းငှါပေးပါသည်။ နှင့်အညီ, နောက်ထပ်ခြင်း, အပိုင်းမစ္စစ်ဟယ်လင် Douglass နောက်တစ်နေ့သည်သူ၏သင်္ချိုင်းသို့ interred လိမ့်မည် ဟူ. ၎င်းဤသို့ဖော်ပြသည်နှင့်သူမ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ် မှလွဲ. အဘယ်သူမျှမကအခြားလူတစ်ဦး၏ခန္ဓာကိုယ်, အာရဇ်ဟေးလ်မှာသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။
"ကျနော့်အမေကရောင်စုံခဲ့သည်; သူမကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး၏တဦးတည်းရှိ၏ သူမသည်သူ၏တက်ကြွအသက်နှစ်ပေါင်းတလျှောက်လုံးအဖေနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကြာသူမ၏သေသောနောက်ငါ့ခမည်းတော်မျှသာမိမိအဟောင်းများကိုနေ့ရက်ကာလအဘို့အဖော်အဖြစ်, ဟယ်လင် Pitt, ဖြူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့သည်သူ၏လူငယ်နှင့်သူ၏ယောကျ်ားဘဝ၏မယား၏ဘေးထွက်မှငါ့အဘ၏ကိုယ်ထည်ကိုယူပြီးစဉ်းစား။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အကြီးဆန့်ကျင်ကျွန်အဖြစ်အလုပ်အများကြီးပြည့်စုံခဲ့လည်းမရှိ, ထိုသို့ငါတို့သည်မိမိသားသမီး, မွေးခဲ့လည်းမရှိအဘို့အအမှန်စင်စစ်ငါ့ခမည်းတော်မကြာခဏ Rochester မှာ, သူလှပသောတောင်ပေါ်ကမျှော်လင့်ချက်သုသာန်မှာသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံစေခြင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် ။
"အမှန်တကယ်မှာတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်မယုံကြည်ကြဘူး။ ကကျိန်းဝပ်ရာအတွက်ကြံစည်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ဒီကို authorize တစ်ကွန်ဂရက်လုပ်ရပ်၏ကျမ်းပိုဒ်အတူဒုက္ခရှိပေလိမ့်မည်။ မစ္စစ်ဟယ်လင် Douglass များအတွက်အမျှကျွန်မရဲ့ဖခင်အားဖြင့်ထိုအတူမိသားစုအများကြီးအတွက်သူမ၏အလောင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်မည်ဟုခွင့်ပြုရန်မကန့်ကွက်ရှိသည်မယ်လို့, ငါအခုမကျင့်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မိသားစု၏တခြားသူတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြဘူး ကြောင်းအဖြစ်ပြောဂရုမစိုက်။ "
ဟယ်လင် Pitt Douglass ဥပဒေကြမ်းဟာအောက်မေ့ဖွယ်အသင်းအဖွဲ့တည်ထောင်ရန်ကွန်ဂရက်ရှောက်သွားရနိုင်ခဲ့တယ်; ဖရက်ဒရစ် Douglass '' အကြွင်းအကျန်အာရဇ်ဟေးလ်သို့ပြောင်းရွှေ့မခံခဲ့ရပါ။
ဟယ်လင် Douglass 1901 ခုနှစ်တွင်ဖရက်ဒရစ် Douglass အကြောင်းကိုသူမ၏အောက်မေ့ဖွယ်အသံအတိုးအကျယ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
သူမ၏အသက်တာ၏အဆုံးအနီး, ဟယ်လင် Douglass အားနည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်, သူ့ခရီးစဉျနဲ့ပို့ချချက်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူမသည်အကြောင်းရင်းထဲမှာဗျာ Francis ကGrimkéဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူကအပေါင်ခံသူမသေဆုံးမှာ paid မခံခဲ့ရပါလျှင်, ရောင်းချလျက်ရှိသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုထဲကနေကြီးပြင်းလာငွေကိုဖရက်ဒရစ် Douglass '' နာမ၌ကောလိပ်ပညာသင်ဆုကိုသွားမယ်လို့သဘောတူရန်ဟယ်လင် Douglass ယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။
အသွေးအရောင်စုံအမျိုးသမီးများအမျိုးသားအစည်းအရုံးအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူရန်, ဟယ်လင် Douglass '' သေသောနောက်, နိုင်ခဲ့သည်နှင့်ဟယ်လင် Douglass မျှော်မှန်းခဲ့သောအဖြစ်တစ်ဦးအောက်မေ့ဖွယ်အဖြစ်အိမ်ခြံမြေစောင့်ရှောက်ရန်။ 1962 ခုနှစ်ကတည်းကဖရက်ဒရစ် Douglass သတိရအောက်မေ့မူလစာမျက်နှာအဆိုပါအမျိုးသားဥယျာဉ်၏ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့သည်။ 1988 ခုနှစ်တွင်ကဖရက်ဒရစ် Douglass အမျိုးသားသမိုင်းဝင်ဆိုက်ကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ: ဟယ်လင် Pitt
အားဖြင့်၎င်း, ဟယ်လင် Pitt Douglass အကြောင်း:
ဟယ်လင် Pitt Douglass ။ အောက်မေ့လွမ်းခုနှစ်တွင်: ဖရက်ဒရစ် Douglass ။ 1901 ။
မိုက်ကယ်အက်စ် Harper ကို။ "ဟယ်လင် Pitt ၏မတ်ေတာအက္ခရာများ။ " TriQuarterly ။ 1997 ။
မိခင်: ဂျိန်းဝဲလ် Pitt (1811 - 1892)
ခမညျးတျော: ဂိဒေါင် Pitt (- 1888?)
မောင်နှမ: 22 အဖြစ်စာရင်းဝင်ဟယ်လင်နှင့်အတူအသီးသီးဂျိန်း Pitt, Lorinda Pitt, Eveline Pitt, ဂိဒေါင် Pitt (အသက်အရွယ် 21 ဖြစ်ခြင်းအဖြစ် 1860 သန်းခေါင်စာရင်းအတွက်စာရင်း, 18, 10, 8, 1870 ခုနှစ်ဟယ်လင်နေဆဲအိမ်မှာစာရင်းသည်သူမ၏နှင့်အတူ အသက်အရွယ်နုပျိုသောညီအစ်မများဂျိန်း / Jenny နဲ့ Eveline / အီဗာ)
Genesee Wesleyan Seminary မှာ, Lima, နယူးယောက်
တောင်ပေါ်က Holyoke အမျိုးသမီး Seminary မှာ, 1859 ခုနှစ်ဘွဲ့ရ
ခင်ပွန်း: ဖရက်ဒရစ် Douglass (ဇန်နဝါရီလ 24, 1884, သူ၏ဒုတိယအိမ်ထောင်မင်္ဂလာလက်ထပ်)
Eleanor Roosevelt ရုစဗဲ့ Quotes
မာရိသညျ Sibley ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဘယ်ကြောင့်ကျောင်းယဉ်ကျေးမှု Matters နှင့်မဟာဗျူဟာဒါဟာပိုမိုကောင်းမွန်စေမမှ
( 'ကတိပေးမှ') ပြင်သစ်ကြိယာ '' Promettre '' Conjugate လုပ်နည်း
ဘောလီဘောထဲမှာစိတျခက်ခဲကြမ်းတမ်း Be လုပ်နည်း
ငွေပြောက်မှူး (Epargyreus clarus)
အဆိုပါ Stono ပုန်ကန်အစေခံကျွန်၏ဘဝအသက်တာများကိုအပေါ်အဘယ်အရာကိုသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သလား
အလေ့အကျင့်နှင့်အတူသင်က Pro ကိုကဲ့သို့ပင် (ပြေးမှ) "Fuir" Conjugating ခံရပါလိမ့်မယ်
Cyberstalking နှင့်အမျိုးသမီး: အချက်အလက်နဲ့စာရင်းအင်းများ
ထိပ်တန်း5ကတော့ပုံအသီးသီးသော-Killing အင်းဆက်ပိုး
ဘူမိဗေဒအချိန်စကေး: အဆိုပါ Paleozoic ခေတ်
Larry က Swartz ကိုနှင့် The ရုတ်တရက် Fury လူသတ်မှု၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
Lucy Parsons: အလုပ်သမားရေးရာအစွန်းရောက်များနှင့်မင်းမဲ့စရိုက်, IWW တည်ထောင်သူ
Geophagy - Dirt စား